အကိုကဖိုက်တော့ အညိုကကြိုက်ပေါ့ ( စ/ဆုံး) – alanlaymyar
ကျမ နံမည် က စိမ်းညို ပါ . .။
အိမ်က ကျမ မိဘတွေ နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အညိုလို့ဘဲခေါ်ကြတယ် . .။
ကျမတို့က ဆင်းရဲတယ် ။ကျမတို့က ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့တခုသော ဆင်ခြေဖုံး
..ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက်တခု မှာ နေတယ် . .။ ကျမအဖေက သစ်စက်မှာ
အလုပ်သမား ..။ အမေကကျမတို့နေတဲ့လမ်းထိပ်မှာ ..မုံ့ဟင်းခါး ရောင်းတယ် ။
ကျမ..၈တန်းရောက်တဲ့နှစ်မှာ အဖေ ဆုံးသွားတယ် ။ အမေ့ဝင်ငွေတခုထဲနဲ့ကျမတို့
မလောက်လို့ ကျမ ကျောင်းထွက်ပြီး အမေရောင်းတဲ့ မုံ့ဟင်းခါးဆိုင် ကို ကျမ
ဆက်ပြီး ရောင်းတယ် . .။ အမေက ဈေးထဲမှာ ပန်းရောင်းတယ် ။ ပန်းက
မနက်ပိုင်းတင်ဘဲ ရောင်းရတာ .. ။မုံ့ဟင်းခါးဆိုင် က တနေကုန် ရောင်းတာ ..။
ညနေ မှောင်တဲ့အထိ ပေါ့ . .။
ကျမ မုံ့ဟင်းခါးဆိုင် တာဝန်ယူလိုက်တာနဲ့
ကျမတို့..ဆိုင်ကအရင်အမေ.ရောင်းတုံးကထက် ပို ရောင်းကောင်းလာတယ် ..။
မုံ့ဟင်းခါး က အရင်အတိုင်းပါဘဲ ..။ ဒီအရသာ ..ဒီမုံ့ဖတ် ပါဘဲ . .။ အမေဘဲ
ချက်တာကိုး . .။ ကျမကိုလဲ အမေက သင်ထားပေးတယ် …။ လူတွေ ပို
စားလာတာက အရင် က အဖွားကြီး ရောင်းရာက အခု အပျိုမလေး ရောင်းလို့ပေါ့
. .။ ရပ်ကွက်ထဲက ကာလသား လူငယ်တွေ လဲ စိမ်းညိုဆိုင်မှာ .. အစားများလာသလို
တာ တွေ့တာနဲ့ မုံ့ဟင်းခါး စားချင်လို့က နဲနဲ ..လူကို ကြည့်ချင်လို့က များများ
..၀င်ထိုင် စားကြတယ်လေ ။
ကျမ ကြောင့် ယောင်္ကျားတွေ လာစားကြတယ် . .ဆိုလို့ ..ကျမ က
ဘယ်လိုပုံလဲ . .ဆိုတာြေ့ပာပြ ဖို့ လိုမယ် ထင်တာဘဲ . .။ ကျမက ဆင်းရဲပေမဲ့
. .မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်း..အသားဝင်းဝင်း နဲ့ ..စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့
မိန်းကလေးတယောက်ပါ ..။နံမည်က အညို ဆိုပေမဲ့ ကျမ အသားက မညိုဘူး . .။
အသား လတ်တယ် …။ ( အင်း..ကျမ ဘယ်လိုရုပ်မျိုးလဲဆိုတာ ရှင်တို့ သိဖို့
ကျော်လို.. ..ရုပ်မျိုး.. ..)အထူးသဖြင့် ယောကျ င်္ားတွေ အရမ်းသဘောကျကြတာက
ကျမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး ..။ ဘာမှ ..လေ့ကျင့်ခန်း အထူးအထွေ မလုပ်ပါဘဲနဲ့ ကျမ
ကိုယ်လုံးတွေ က အချိုးကျ လှပနေတာ . .။
ကျမရဲ့ ခါးလေးက အရမ်းသေးတယ် ။ ထွာဆိုင်ခါးလို့ တင်စားကြတာမျိုး . .။
ခါးသေးသေး ရဲ့ အောက် က … စွင့်ကားထွက်နေတဲ့ တင်တွေက ကျမ ကိုယ်မှာ
လူကြိုက်အများဆုံး အစိတ်အပိုင်းတခုပါဘဲ ရှင် . .။
က သဲသဲမဲမဲ ..ဒီတင်တွေကို ငမ်းကြပါတယ် ..။ အမေက ကျမ အပျိုဖေါ်ဝင်စကထဲက
..( အညို..လမ်းလျောက်ရင် ဖင်လှုပ် မလျောက်နဲ့ . .) လို့အမြဲ ဆူလေ့ရှိပါတယ် . .။
ကျမက သက်သက် လှုပ်လျောက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး .ရှင် . .။ တင်တွေက
နားရောက်တော့ အပေါ်ကို ခပ်မော့မော့လေး ကော့တက်နေကြတယ် . .။ ကျမတို့
က .. ရေချိုးခန်းနဲ့ ရေချိုးနိုင်တဲ့.. လူတန်းစားမဟုတ်တော့ ကျမ အိမ်ရှေ့က
ရေဘုံပိုင်မှာ ရေချိုးပြီ ဆိုရင် ဘေးနားက အိမ်တွေက ..လူပျိုလူအိုယောကျ င်္ားသားတွေ
ဟာ ကျမ ..ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်အပေါ်ဖက်ကလျံထွက်နေတဲ့ .. ၀င်းမွတ်တဲ့ ကျမ
ရဲ့ ဖြိုးဖြိုးရွှေရင်တွေ နဲ့ ရေစို ထမိန်ကြောင့် ..ထင်းထင်းလင်းလင်း
တဏှာရာဂစိတ်တွေ ပြင်းထန်ပြီး . ချောင်းကြမြောင်းကြတယ်လို့ ကျမ
နောက်တခု ကျမရဲ့ ထူးခြားချက်တခုက ကျမရဲ့ မျက်လုံးတွေပါဘဲ . .။
တွေက ပြောကြတယ် . .။ ကျမက သဘောရိုးကြည့်လိုက်ပေမဲ့ ယောက်ျားတွေက
..ယောကျ င်္ားတွေက ဒါကို သူတို့ကို မြှူဆွယ်တယ်လို့ ..ထင်ကြတယ်လေ ..။
ကျမတို့ရပ်ကွက်က..မိန်းမတော်တော်များများဟာ..သူတို့ယောကျ င်္ားတွေ.. ..သားတွေ….
ားသလေးဘာလေးနဲ့ အတင်းချကြတယ်ေ လ ..။
ကျမဆိုင်က ယောကျ င်္ားတွေတရုံးရုံးနဲ့ .မြင်မကောင်းဘူးလို့..ရပ်ကွက်ရုံးက
ဥက္ကဌ ကို ပြောတဲ့ လူက ပြောတယ် . .။ရပ်ကွက်ရုံးက ဥက္ကဌကလဲ ..ကျမ နဲ့
စကားပြောရင် လေ မပြတ်တော့ဘူး ။သူကလဲ ကျမ ရဲ့ ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို
စူးစူးဝါးဝါး ကြည့်တဲ့ယောကျ င်္ားတွေထဲမှာ တယောက် အပါအ၀င်ပါ . .။
.မုံ့ဟင်းခါးရောင်းတာဘန်းပြပြီး..ခေါ်ရင်လိုက်တယ် .ဆိုပြီး..ကွယ်ရာ အတင်းချတဲ့
အိမ်နားနီးချင်းတွေ လဲ ရှိတာပေါ့ . .။ကျမ က ဘယ်သူဘာဘဲပြောပြော ဂရုမစိုက်ခဲ့
ပါဘူး .. ။ ကျမဆိုင်ကို လာစားကြ ..လာထိုင်ကြတဲ့ ယောကျ င်္ားတွေ ..ကောင်လေးတွေ
နဲ့လဲတခါမှ ချိန်းတာ လိုက်တာ မလုပ်ဘူးသေးပါဘူး . .။
ရှိတယ် ..။စာအုပ်ဆိုင်လေး ရဲ့ ပိုင်ရှင်က ကိုသိန်းမြင့် ..တဲ့ ..။ ကျမက ..
ငယ်ငယ်ကထဲက စာဖတ် ၀ါသနာပါတာ . .။
တွေမှာ.. ၀တ္ထု ဖတ်လေ့ရှိတယ် . .။ကိုသိန်းမြင့် ဆိုင်ကနေငှားဖတ်တယ် . .။ကျမလဲ
လိုင်းစုံ…စာရေးဆရာစုံ…စာအုပ်မျိုးစုံ ဖတ်တာ . .အချစ်..စွန့်စားခန်း ..လှို့ဝှက်သဲဖို
..စုံထောက် ..သိုင်း ..ဘာသာပြန် ….ပေါ့ …။ တနေ့ ရင်သိမ့်တုန် စာရေးဆရာ လို့
အမည်ပေးထားတဲ့ အချစ် ..စွန့်စားခန်း..ရောမွှေထားတာတွေရေးတဲ့..
စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်မိရာက ..သူကအရေးအသားတွေက ကျမ
စိတ် …တိတိကျကျ ပြောရရင် .. ကျမရဲ့ ကာမစိတ် ပေါ့ . .ကျမကာမစိတ်တွေကို
ထကြွနိုးကြားလာစေတာကြောင့် ကျမလဲ အပျိုပေါက်စ ကောင်မလေးတွေလိုဘဲ
..ဒီစာအုပ်ကို အိမ်သာထဲယူဖတ်ရင်း …ကိုယ့်ပေါင်ကြားကိုကိုယ်.. ပွတ်သပ်..
အပျိုဖေါ်ဝင်စတုံးက အဖြစ်တွေကို ပြန်စဉ်းစားရင် အရမ်းရှက်မိတာဘဲ ..။ကျမ
လေ..တအား ..( ထ )တာ ..။ အမွှေးပေါက်ခါစ ..ရာသီသွေးလာခါစမှာ
စောက်ပတ်ယားတာ အရမ်းဘဲ ..။ စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့လဲ ..လိင်အကြောင်းတွေကို
လက်လှမ်းမှီရာ စာအုပ်တွေ ဖတ် . .အသက်ကြီးပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့..မိန်းမတွေဆီက
စပ်စု..နဲ့ ..။ ယောင်္ကျားအင်္ဂါ ..( လီး )ဆိုတာကိုလဲ တအား တွေ့ဘူးချင်မိခဲ့တာဘဲ ။
ယောင်္ကျားတယောက်ရဲ့ အကိုင်အတွယ်ကို ခံချင်တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်နေမိတာ
အရမ်းဘဲ..။ ကျမ ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါစပ် ( စောက်ဖုတ်) ..တောင့်တ..ယားယံနေတယ် . .။
ဘာကိုတောင့်တနေသလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းနေပါတယ် . .။ ယောင်္ကျားလိင်တန်ဆာ
ဘဲပေါ့ရှင် . .. ။( လီး ) ဆိုတဲ့ အတန်ချောင်းကြီးပေါ့ …။
လိင်ကို တောင့်တာတာတကယ်တော့ သဘာဝပါဘဲ . .။မတောင့်တဘူးဆိုရင် တခုခု
မှားယွင်းနေလို့ပေါ့ . .။ခက်တာက.. ..ကျမရဲ့ဘေးအနီးအနားမှာက ယောကျ င်္ားတွေ
၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ် . .။ဘယ်သူ့ကို လက်ခံမလဲ . .စဉ်းစားစရာဘဲ . .။
ကျမက တမျိုး ..။
ဖြူသန့်ပြီးရုပ်အရမ်းချောတဲ့..ကောင်လေးတွေကိုဆိုရင်..စိတ်က သိပ်မလာဘူး .. ။
အရုပ်ဆိုးဆိုး အသားညိုညို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကောင်တွေက ကျမ ညအိပ်ရာဝင်
စိတ်ကူးထဲက ကျမကို ကာမဆန္ဒတွေ ဖြေဖျောက်ပေးတဲ့ သူတွေပေါ့ . .။
စာအုပ်အငှားဆိုင် က ကိုသိန်းမြင့်ကလဲ အလာကြီး . .။ သူကလဲ တခြား
ယောက်ျားတွေလိုဘဲ ကျမကို ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ချင်တယ်လေ . .။ သူက
တယ် . .။ကိုသိန်းမြင့်ကလဲ စာအုပ်သွားငှားရင် တို့လားဆိတ်လား . .နဲ့ . .။ အင်း
. .ယောင်္ကျားတွေများ . .ဘယ်သူ့မှ မယုံရဘူး . .။ နှာဘူးတွေ ဘဲ များတာဘဲ
. .နှာဘူး ဖြစ်ချင်ဖြစ် ..ဂန်ဒူး ဖြစ်ချင်ဖြစ် …တခုခုဘဲလေ . .။
ထဲမှာ …လူတယောက်နဲ့တိုးတယ် . .။ဆိုင်ကလေးကလဲ စာအုပ်တွေက ..
များလွန်းတော့ ..ငှားတဲ့လူတွေ အတွက် စာအုပ်ကြည့်ဖို့က နေ၇ာသိပ်ကျဉ်းတယ်။
တခါတလေ လူတွေများနေရင် တယောက်နဲ့တယောက် ..ထိမိတယ် . .။ မလွတ်ဘူး
။ကျမ စာအုပ်တွေ ရှာနေတုံး . .ဒီလူဝင်လာတယ် . .။ သူက အသားညိုညို ခပ်ပိန်ပိန်
…။သူ့ မျက်လုံးအကြည့်တွေက ကျမရင်ကို တုန်သွားစေတယ် . .။ မြင်မြင်ချင်း ..
စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ် . .။ သူ့ရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး စိုက်ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက သိပ်
ရဲတင်းလွန်းတယ်လို့ ကျမ ထင်တယ် .. ။အကြည့်၇ိုင်းတွေ လို့လဲ ပြောနိုင်တယ် .။
ကျမ ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ထွင်းဖေါက်ပြီး ကျမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာ ..
အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံး ကို သူ မြင်နေရတဲ့အတိုင်း …ဘဲ..
ကျမ စာအုပ်၇ှာနေတုံး ..သူ ကျမနားကို ရောက်လာတယ် …။သူနဲ့
တထွာအကွာတောင် မဝေးဘဲရှိနေတဲ့ ကျမ တင်သားတွေကို သူ ငုံ့ကြည့်နေတယ်။
တဏှာဘူး..ဘဲ ..။ ကျမလဲ လွယ်လွယ်ဘဲ ..စာအုပ်တအုပ်ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး
..စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်၇ှင် ကိုသိန်းမြင့် ထိုင်နေတဲ့စားပွဲဆီသွားဖို့ လုပ်တယ် . .။ ကျဉ်းတဲ့
လမ်းကလေးအတိုင်း..ကိုယ်ကို ဘေးတိုက်ရွှေ့ပြီးခြေလှမ်းလိုက်တာ ..ဒီလူရဲ့ ကိုယ်
အရှေ့ပိုင်းနဲ့ ကျမရဲ့ အနောက်ကို သိသိသာသာ ကားထွက်နေတဲ့ တင်သားတွေ
မိမိရရကြီး ပွတ်ထိမိသွားရတယ် . . ။
( အို …ဘယ်လိုတုံး . .)
ကျမရင်တွေ တကယ်ဘဲ ရင်သိမ့်တုန် သွား၇တယ် …။ သူ …သူ့ေ၇ှ့ခြမ်း
ပေါင်ကြားက မာမာအတန်ကြီးတခု နဲ့ကျမ ဖင်တွေ ..မိတ်ဆက်..ပွတ်တိုက်မိသွားရတာ
ကျမ တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ ထသွားရပါတယ်ရှင် . .။
( ဆောရီး ဘဲ . .)
သူက တောင်းပန်စကားပြောတယ် . .။
ကျမလဲ . .ခပ်တိုးတိုးလေသံ နဲ့ . .( အရမ်းတိုးတာဘဲ . .) လို့ ပြောလဲပြော
မျက်စောင်းလဲ ထိုးပစ်လိုက်တယ် …။
ကိုသိန်းမြင့် က အရေးထဲ . .( ဟဲ့ . စိမ်းညို ..လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ရရဲ့လား
…နင်မှာထားတဲ့ ဟို . .ရင်သိမ့်တုန်..စာရေးဆရာ ရဲ့ စာအုပ်တော့
မထွက်သေးဘူးဟ ..) လို့ ကျမ နံမည် ကိုပါ ဒီလူရှေ့ ခေါ်လိုက်လို့ ..ဒီလူတော့
ကျမနံမည် သိသွားပြီ ..လို့ ကျမ သိလိုက်တယ် . .။
( ငါရလာတာနဲ့နင့်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး ..ငှားမှာပါ . . .ငါ နင့်ဆိုင်ကို
လာပို့မယ်ဟာ . ..)
ကိုသိန်းမြင့် က ကျမ ငှားမဲ့စာအုပ်ကိုေ၇းမှတ်နေတုံးလဲ ဒီလူက
ကျမအနောက်ကနေ ကျမ တင်တွေကို ခေါ်တောတထောင်အား မျက်လုံးတွေနဲ့
စိုက်ကြည့်နေမယ် ဆိုတာ ကျမ သိနေတယ် . . .။
ကျမ မုံ့ဟင်းခါးဆိုင် က လမ်းတဖက်မှာဆိုတော့ စာအုပ်လေးကိုင်ပြီး ကျမ
ဆိုင်ဖက်ကို ..အသွား . .မသိမသာ လှည်ကြည့်လိုက်တော့ စောစောက လူဟာ
. .ကျမကိုယ် နောက်ပိုင်းကို စူးစူးဝါးဝါး ကြည့်နေတာကို ကျမ တွေ့လိုက်ရပါတယ်
. ..။တကယ့် နှာဘူး ..ဘဲ…။
ကျမဆိုင်ကို ပြန်ရောက်တော့ .လူတချို့ လာစားကြတာနဲ့ ..
ရောင်းနေရတယ် . .။ ( မုံ့ဟင်းခါး တပွဲ ..ဘူးသီးကြော်နဲ့ . .)
့ …( ဟင် … )
စောစောကလူ …။သူ့ကို မျက်မှောင်ကြုံ့ပြီး ကြည့်လိုက်မိပြီး သူမှာတာကို ပြင်ပေး
လိုက်ပါတယ် …။သူ့ကို မကြည့်မိအောင် မျက်နှာလွှဲနေမိတယ် …။ တဖြေးဖြေးနဲ့
နေတုံးဘဲ . .။ လူတွေ တယောက်မှ မရှိတော့ ..သူ က ( နောက်ထပ် မုံ့ဟင်းခါး ..တ
ပွဲ လုပ်ပါအုံး …ဘူးသီးကြော် နဲ့ ..ဘဲ . . ) လို့ ထပ်မှာတယ် . .။
သူ ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီး ထသွား ပြီးတော့ မှ သူ ပေးသွားတဲ့ ပိုက်ဆံပေါ်မှာ
ခဲတံနဲ့ . .စိမ်းညို ကို အရမ်းချစ်မိသွားပြီ . . .လို့ ရေးသွားတာ ကျမ ပိုက်ဆံတွေ
ငါးသည်ဒေါ်ပု ကို ပေးဖို့လိုလို့ ရေ ရင်းတွေ့လိုက်တယ် ။ အောက်က .. သံဒိုင်
လို့ လက်မှတ်ထိုးထား တယ် ..။ သူ့နံမည်နဲ့ သူ့ ရုပ် နဲ့တော့ လိုက်ဖက်ပါတယ် ။
ကျမလဲ ဘာရယ်မဟုတ် . .သူစာရေးထားတဲ့ ငွေ နှစ်ဆယ်တန် အနွမ်း
လေးကို သပ်သပ် ဖယ်ထားမိလိုက်တယ် ။ နောက်တနေ့မှာလဲ ..ကိုသံဒိုင်ဟာ..ကျမ
ဆိုင်မှာ လာပြီး မုံ့ဟင်းခါး စားပါတယ် . .။ ဒီတခါ သူ ပိုက်ဆံပေးတော့ ကျမ ..
ငွေစက္ကူ ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ ဘာမှေ၇းမထားဘူး . .။ သူ့ကို
ဖျတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်မိတော့ . .သူ ..ပြုံးနေတယ် ..။ ကျမ ငွေစက္ကူပေါ်မှာ
ဘာများရေးထားမလဲလို့ကြည့်တာ သူ . .တွေ့သွားတယ် …။
ကျမဆီကို သူ နေ့တိုင်း လာပြီး မုံ့ဟင်းခါး ၀ယ်စားတယ် ..။တခါတလေ ..
ကိုသိန်းမြင့် စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ သူ နဲ့တိုးတယ် . .။ နောက်ထပ်တခါ သူနဲ့ ကျမ
ကိုယ်ချင်း ထိမိ ပွတ်မိသေးတယ် ..။ ဒီတခါ ကတော့ သူ့ ဖင် နဲ့ ကျမ ဖင်တွေ ..
ွပွတ်မိကြတာ . .။ ကျမ ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ ဖြစ်သွားရ တယ် . ..။
တခါတလေ သူ မလာတာကြာရင် ကျမ မျှော်မိရ တယ် .. ။ ကျမ စာအုပ်ဆိုင်ကိုများ
သူ လာသွားသလား သိချင်တာနဲ့ ..စာအုပ်သွားငှားတယ် ။ ကျမလဲ တကယ်တော့
ကိုသံဒိုင် ကို စိတ်ဝင်စားနေမိပါလား . .။
ကိုသိန်းမြင့် က ..( ကိုသံဒိုင် လာသွားတယ် . .စိမ်းညို . .သူက နင့်ကို
တော်တ်ာကြိုက်နေပုံရတယ် . .. နင့်အကြောင်းတွေ လာလာမေးတယ်
ဟ.. …နင်ကကော …ဘယ်လိုလဲ .. ) လို့ စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ စကားစ တတ်တယ် . .။
ကျမလဲ ကိုသိန်းမြင့်ကို . .( ကျမ ဒါတွေ မစဉ်းစားဘူး . .ဈေးရောင်းနေရတာနဲ့
မအားဘူး )လို့ဘဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ် . .။
ကိုသိန်းမြင့် က .. ( ကိုသံဒိုင် က လူကောင်း နော . .ငွေရှာလဲ ကောင်းတယ် ..
သူက ပုလဲနဲ့ငါး သဘောင်္ာသား . .ငါးဖမ်းသင်္ဘော ပေါ့ဟာ . .အိုဗာတိုင်းတွေ..
ဘောက်ဆူးတွေ နဲ့တော်တော် ပွတာဟ ..ငါးကတော့ ..အိမ်ပြန်သယ်လို့ ရတယ်
ကြားတယ် . .အေး . .နင်ကလဲ မုံ့ဟင်းခါး ရောင်းတာဆိုတော့ . .သူကလဲ ငါးတွေ
အလကားရတဲ့လူ . .ကိုက်ရော… . .စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ စိမ်းညိုရေ . . . ) လို့
စိမ်းညိုလဲ . .( ကိုသိန်းမြင့်ကြီး . .အောင်သွယ်ခ ဘယ်လောက်ရတုံး . .တခါထဲ
. .အောင်သွယ်နေလိုက်တာများ..ဟွန်း . .)လို့ မျက်စောင်းထိုးပြီး ..စွာပစ်လိုက်တယ် ။
ကျမ စိတ်ထဲကတော့ ကျေနပ်မိတယ် . .။ ကိုသံဒိုင် ကို ကျမလဲ စိတ်ဝင်စားမိ နေပြီ။
ကျမလဲ လူကျလာတာနဲ့ မုံ့ဟင်းခါး ဘဲဖိရောင်းနေတာ ..သူ…သူ..ကိုသံဒိုင်
ကျမရှေ့ ရောက်နေတာကို သတိမထားမိဘူး . .. ။ကိုသံဒိုင်ကဆိုင်မှာ..လူရှင်းတဲ့အထိ
စောင့်ပြီးမှ..ကျမ ကို စကားတွေ ပြောတော့တာဘဲ …။
( စိမ်းညို ကို သိပ်သိပ် ချစ်တယ် . .) ဆိုဘဲ . .။ အဟိ …။
( တကယ် ချစ်တာပါ . .စိမ်းညိုကို လက်ထပ်ချင်တယ် . .. တောင်းရမ်း
ကိုသံဒိုင် ရဲ့ ပုံက တကယ့်ကို ကျမကို ချစ်နေတဲ့ ပုံ ဘဲလေ ..။ ကျမကို
ချစ်တာလား . .ကျမ ရဲ့ တောင့်တင်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို ချစ်တာလားတော့
မသိဘူး . .။ သူ ကြည့်တဲ့ ပုံကတော့ ကျမကို စားချင်ဝါးချင်တဲ့ ပုံမျိုး . .။
တဏှာစိတ်တွေ ယိုဖိတ်နေတဲ့ ပုံမျိုးလေ . . ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျမလဲ
ရင်တအားခုံတာဘဲ.. …။ သူ့ပုံက သန်မာတောင့်တင်းပြီး . .မိန်းမတယောက်ကို
..ကောင်းကောင်း ..ဟိုဒင်းဖြစ် ( မရိုမသေ့စကား နဲ့ . .) လိုးမဲ့ပုံမျိုး …. ။
ဒီလိုနဲ့ . .သင်္ကြန် ကို ရောက်လာတယ် …။ သင်္ကြန်မှာ ကျမ မုံ့ဟင်းခါးဆိုင်
မထွက်ဘူး …။ အမေကတော့ အခါတွင်းတခုလုံး ဥပုဒ်စောင့်တယ် …။
ကျမကတော့ သက်သက်ကြီး ..ရေသွားမပက်..ပေမဲ့ ဟိုနားဒီနားတော့ ..
လျောက်ကြည့်အုံးမယ် လို့တော့ .. စဉ်းစားထားတယ်လေ ..။ တနှစ်ပတ်လုံး
..ဈေးဘဲထိုင်ရောင်းနေတော့ ကျမလဲ ဘယ်မှ မရောက်ဘူးလေ ..။
ကျမဆိုင် နဲ့မလှမ်းကမ်းက ကန်ထရိုက်တိုက်မှာ နေတဲ့ ..( ကျော်စိုးသွင်)
ဆိုတဲ့ တရုပ်ကပြားကောင်လေးကတော့ သူတို့က ဂျစ်ကားနဲ့ လည်မှာမို့
လိုက်ချင်လိုက်ဖို့ ပြောထားတယ် …။ သူ့ကိုကြည့်ရတာလဲ ရိုးသားတဲ့ပုံဘဲမို့ ..ကျမ
လိုက်ချင်လိုက်မယ် လို့ ပြောထားတယ် …။
သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ လမ်းထိပ်မှာ ရပ်ကွက်ထဲက မုံ့လုံးရေပေါ်လုပ်တာ ..
ကျမလဲသွားကူတယ် …။ ကျမကိုရပ်ကွက်ထဲကလူငယ်တွေကရေလာလောင်းကြတယ်
.. ။ရေ တကိုယ်လုံးရွှဲတော့ ကျမ ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်တွေက အသားနဲ့ကပ်နေတာ
ကြောင့် ..ကျမရဲ့တောင့်တင်း အချိုးကျတဲ့ကိုယ်လုံး ကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း ..ဖေါ်ပြ
နေတာပေါ့ . .. ။ကျမရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း အေးမိ ပြောပြတယ် . .။ ကျမ ဖင်တွေက
အလုံးလိုက် ထင်းထင်းကြီး ပေါ်လွင်နေတယ် တဲ့ …. ။
အကျနေ့ရောက်တော့ ကျော်စိုးသွင် က လာခေါ်တယ် . .။ သူတို့ ရဲ့
ဂျစ်ကားလေးပေါ်မှာ ကျော်စိုးသွင် အပါအ၀င် ယောက်ျားလေး က ၃ယောက်
. .မိန်းကလေးက ကျမ အပါအ၀င် ၃ယောက် ပေါ့ . .။ ကျမလဲ သူများ နည်းတူ
မျက်နှာသုတ်ပုဝါတထည် ခြုံသွားတယ် …။
ကျော်စိုးသွင် ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ စိန်ဝင်းထွန်း ဆိုတဲ့ ကောင် က
ကျမကို စတွေ့ထဲက ပြီတီတီ နဲ့ …။ ရေတွေ သဲသဲမဲမဲ ပက်တဲ့နေရာလဲေ၇ာက်ရော
စိန်ဝင်းထွန်း ရဲ့ ဇာတိရုပ်ပေါ်တော့တာဘဲ ..။
ကျမ ရဲ့ ဖင်တုံးတွေ ကို အနောက်ကနေ သူ့ကိုယ်အေ၇ှ့ပိုင်းနဲ့ ဖိကပ်
ထောက်တော့တာဘဲ . .။ကျမလဲ ၇ှက်တာနဲ့ မသိချင်ယောင်ဘဲ ဆောင်နေလိုက်တာ
ငြိမ်နေမှန်းသိတာနဲ့ နောက်ပိုင်း ပိုကဲလာ တယ် …။
ကျမဖင်တွေကိုသူ့လက်ဖ၀ါးကြီးတွေနဲ့ပါ ကိုင်လာ တယ် . .။လူတွေ
အရမ်းစည်ကားတဲ့နေရာတွေမှာ ရေပိုက်တွေနဲ့ ၀ိုင်းထိုးတဲ့အထဲဆိုတော့
နားထဲရေ၀င်မှာ စိုးရတာကြောင့် ..ကာကွယ်နေတုံး အခွင့်အရေးယူတာဆိုတော့
သူလုပ်သမျှခံရတဲ့သဘော ဘဲ . .။
စိန်ဝင်းထွန်း ဟာ ကျမရဲ့ ဖင်တွေကို ဆုတ်နယ်တာမှ ..သူ့မယားတောင် ဒီလို
လုပ်လို့ ရချင်မှ ရမယ် . .။ ဆုတ်နယ်လိုက် ဖင်ကြားထဲ လက်ထိုးပြီး နှိုက်လိုက် နဲ့
လက်သရမ်းနေတာ..ကျမလဲ ကားပေါ်က ရောက်ရာနေရာမှ ဆင်းကျန်ရစ်ချင်စိတ်တွေ
တခြားမိန်းကလေးတွေ နဲ့အဖွဲ့ကျပြီး တဟားဟား တ၀ါးဝါး ဖြစ်နေတယ် . . ။
စိန်ဝင်းထွန်း က ကျမကို အထင်အမြင်သေးလို့ လုပ်တာဘဲ လို့ ကျမထင်ပြီး
၀မ်းနည်းမိနေတယ် . .။ တဆင့်တက်ပြီး ကျမ နို့တွေကို တီရှပ်အောက်ကနေ
လက်လျိုသွင်းပြီး ပေါ်တင်ကြီး ကိုင်တော့ ..ကျမလဲ တော်တော် စိတ်ဆိုးမိပြီး
. .ဘာလုပ်တာလဲ . .လက်သရမ်းလှချည်လား . .လို့ မေးလိုက်တယ် . .။ ဒီအချိန်မှာ
သူတို့က ပန်းခြံကြီးတခုမှာ ခဏနားဖို့ သစ်ပင်အောက်မှာ ကားထိုးဆိုက်လိုက်တဲ့
အချိန်ပေါ့ …။စိန်ဝင်းထွန်း က အများေ၇ှ့မှာ အအော်ခံလိုက်ရလို့ မျက်နှာတွေနီရဲ
ပြီး .. ( ဘာလုပ်လို့လဲ . .အဖြစ်သဲမနေနဲ့ …) လို့ လှမ်းဟောက်တယ် . ။ကျမလဲ
မဟုတ်ရင်မခံဘူး ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သူ ဆိုတော့ ..ဒီလို လာကျောလို့ မရဘူး . .။(
ရှင်တချိန်လုံး ကျမဖင်ကိုနှိုက်နေတာဘဲ . .) လို့ ကျမလဲ အသံအကျယ်ကြီးနဲ့
အော်လိုက်တော့ အားလုံး ကြားသွားကြရော …။ စိန်ဝင်းထွန်းလဲ ရှက်ပြီး
မျက်နှာတွေ နီရဲပြီး . .( ခင်ဗျား . .လာစောက်၇ှက်မခွဲနေနဲ့ဗျာ ..ရေပက်ခံထွက်တာဘဲ.
ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ . . .) လို့ ပြန်အော် သည် ။
ကျမလဲ ကားပေါ်က ခုန်ဆင်းလိုက်တယ် …။ ရေပက်ခံကားတွေ အများကြီး
နားတဲ့နေရာမို့ ..တခြားကားတွေက လလူတွေလဲ ကြည့်နေကြတာပေါ့ . .။
ကျော်စိုးသွင် ကားပေါ်ကခုန်ဆင်းပြီး ကျမကို လိုက်တောင်းပန်တယ် . .။
( စိန်ဝင်းထွန်း ကိုယ်စား ကျနော် တောင်းပန်တယ် မစိမ်းညို . .သူ မူးနေလို့ပါ
..ပြန်လိုက်ခဲ့ပါဗျာ . .မစိမ်းညို ဘယ်လို အိမ်ပြန်မလဲ . .)
( ရတယ် . .ငါ့ဟာငါ ပြန်နိုင်တယ် . .)
ကျမလဲ ခြေဆောင့်ပြီး ..ကားတွေကြားထဲကနေ ဝေးရာကို ပြေးထွက်ခဲ့ပေမဲ့
တကယ်တော့ ကျမမှာ ပိုက်ဆံဆိုလို့ တပြားတချပ်တောင် မပါဘူး . . .။
စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ..ထွက်ခဲ့တာ လမ်းမကြီးပေါ်ေ၇ာက်လာတယ် . .။ ကျော်စိုးသွင်တော့
ပါမလာတော့ဘူး ..။ လမ်းမကြီးပေါ်သွားနေတဲ့ ကားတွေ က တယောက်ထဲ
လျောက်နေတဲ့ ကျမကို . .ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ အော် စ သွားကြတယ် .. ။
တချို့က ကားရပ်ပြီး လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ် . .။
စိမ်းညို . .. .စိမ်းညို ….
ကားတစီးပေါ်က ခေါ်သံ ကြားရတယ် . .။
ကျမ နံမည်ကို သိနေပါလား . .။ ဘယ်သူများပါလိမ့် ….ဆိုပြီး လှည့်ကြည့်တော့ . .
( ဟယ် . . .ကိုသံဒိုင်ကြီး . . .. . )
( စိမ်းညို …ဘယ်သွားမလို့လဲ …တယောက်ထဲ လျောက်လည်နေတာလား . .)
( အဲ..အိမ်ပြန်မလို့ ..ကိုသံဒိုင် ကော တယောက်ထဲလား . .လျောက်လည်တာလား . .)
( ဆိုပါတော့ . .ကဲ တက် ..တက်) …
ကိုသံဒိုင် မောင်းလာတဲ့ ပါဗလစ်ကာ ကားစုတ်စုတ်လေးထဲ ကျမ ၀င်လိုက် တယ် . .။
( ကျနော်လဲ ပျင်းတာနဲ့ အပြင်တပတ် လျောက်ကြည့်တာ . .စိမ်းညို ..အခုလို . .
ထွက်မယ်မှန်းသိရင် . .ကျနော် လာခေါ်ပါတယ်ဗျာ . . .)
ကိုသံဒိုင် က စိမ်းညိုကို ၀မ်းသာအားရ ပြောရင်း စိမ်းညိုရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ ကိုယ်လုံး ကို
စူးစိုက်ကြည့်နေရာ စိမ်းညိုလဲ ..သူ့အကြည့်တွေကြောင့် မနေတတ်တော့ . .။
“ အို..အကိုက သိပ်ကြည့်တာဘဲ . .အညို ရှက်လာပြီ . .. .”
“ စိမ်းညိုက သိပ်လှနေလို့ပါ . . .”
မောင်းအုံး . .ကလေးတွေ ရေပက်ဖို့ ဖြတ်ပြေးနေကြတယ်” လို့ ကျမကပြောလိုက်ရ
ပါတယ် . .။
ကိုသံဒိုင်နဲ့ ခုလို ချိန်းမထားဘဲ ဆုံရတာ ကျမအံ့သြနေမိတယ် . .။ ကိုသံဒိုင်
က ကျမကို စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ကို ခေါ်သွားပြီး . .ကြေးအိုးပြုတ်ပူပူတခွက်
တိုက်တယ် ..။ သူက ကျမသောက်ဖို့ . .ဘိလပ်၇ည် မှာပေးပေမဲ့ သူကတော့ . .
အရက်သောက်တာကြောင့် ကျမလဲ ..“ဟယ်. .အရက်တွေသောက်နေတာလား..အကို
. .မသောက်ပါ နဲ့”လို့ တားမိပါတယ် . .။ ကိုသံဒိုင် က ..“ ရေစိုပြီးချမ်းတာ
သက်သာအောင်ပါ အညို . .နဲနဲပါ . . ”လို့ပြောတယ် ..။ သောက်ပြီးတော့ သူ
စကားများ..အာသွက်လာတာ ကျမ သတိထားမိရတယ် .. .။ စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးသလို ..
ရဲဆေးတင်တယ် ဆိုတာ ..ဖြစ်မယ် ထင်တာဘဲ . . .။
( အညို . ..အကိုလေ . .အကို . .အညို့ကို သိပ်ချစ်တာဘဲ . . အညို အကို့အချစ်ကို
လက်ခံတယ် မဟုတ်လားဟင် . .”
ကျမလဲ သူ့ကို စိတ်ထဲက ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေခဲ့ရတာပါ . .။
သူမလာတဲ့နေ့ဆိုရင် ကျမဟာ ဈေးေ၇ာင်းရတာ မပျော်ဘူးလေ . .။
သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့မှ ကျမ အလုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လုပ်နိုင်ခဲ့တာ . .။ဒါ…ဒါ..
အချစ် ..ပေါ့နော် …။
“ အကို..အညို့ကို လက်ထပ်ချင်တယ် . .အညိုက အကို့အချစ်ကို လက်ခံရင်ပေါ့ . .”
ကျမလဲ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူး . .။ ရှက်လဲ ရှက်နေလို့ . .။
ကျမနဲ့ သူ တနေကုန် ရေပက်တာတွေ လိုက်ကြည့်တယ် . .။ ပြန်ခါနီးမှာ သူ
က ကျမ လက်ကို ဆုတ်ကိုင်လာတယ် . .။
“အညို..မနက်ဖန် အကို လာခေါ်မယ်နော် . . လျောက်လည်ကြအုံးမယ်. .”
ကျမကလဲ သူခေါ်မှခေါ်ပါ့မလားလို့ . .ပူနေတဲ့ကောင်မ ပါ . .။ ကျမ ပြုံးပြုံးလေး
ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်ပါတယ် . .။
အိမ်ရောက်တော့ . .အကိုနဲ့ သွားလာခဲ့ရတာတွေကို စမြုံ့ပြန် စဉ်းစားပြီး
ပီတိတွေ ဖြာဝေနေခဲ့ရတာပေါ့ . ..။ အကို့အကြောင်းကို စဉ်းစားရင် ရင်တွေတအား
ခုံတာဘဲ . .။ မနက်ဖန် . .တွေ့ကြဖို့ စိတ်စောနေမိတယ် . . ..။
ကျမ မနက်စောစောထပြီးေ၇မိုးချိုး . .အလှပြင်တယ် . .။ အကိုနဲ့တွေ့ရမှာမို့ ကျမ
ရင်တွေခုံနေတယ် . .။ ကိုသံဒိုင် လာခေါ်တော့ အိမ်နားနီးချင်းတွေက ..
၀ိုင်းကြည့်ကြတယ် ..။ စိမ်းညို ပထမဦးဆုံး ယောင်္ကျားနဲ့ထွက်တာ ဘဲလေ . . .။
.တချို့နေရာတွေမှာ ကားတွေ ပိတ်ပြီး အကြာကြီး ကြာနေတတ်တယ် . . ။ ဒါပေမဲ့
အကိုနဲ့ကျမ ပျော်တယ် . .။ တယောက်အကြောင်းတယောက် ပြောပြကြတယ် .။
အကိုက စကားေ၇ာဖေါရောနဲ့ ကျမ လက်တွေကို ဆုတ်ကိုင်တတ်တယ် . .။ ကျမလဲ
သူနဲ့ထိတွေ့ရတာ ရင်တအားတုန်တာပေါ့ …။
ဒီနေ့လဲ မနေ့က စားသောက်ဆိုင်လေးကို ပြန်ရောက်တယ် . .။
အကိုက ကျမကို ( ကြေးအိုး ဘဲလား . . ) လို့မေးတယ် . .။ ကျမလဲ ရေတွေစိုနေချိန်
ပူပူသောက်ရစားရတာကို သဘောကျမိတယ် . .။ အကိုကတော့ မနေ့ကလိုဘဲ ..
အရက်တခွက် မော့တယ် . .။ စားသောက်အပြီး အကိုက ကျလက်တွေကို
ဆုတ်ကိုင်ပြီး . .( အကို့ကို ချစ်တယ်မှုတ်လား …စိမ်းညို . . . . ) လို့ မေးတယ် ။
ကျမလဲ သိပ်မူမနေချင်တော့ဘူး . .။
(ဒီလောက်ဆို…မသိသေးဘူးလား…အကိုရယ် . .) လို့ ပြန်ဖြေမိတယ် . .။ အကိုက ..
“အညို ပါးစပ်ကနေ အကို့ကို ချစ်တယ် . .လို့ ဖြေတာကြားချင်တာပေါ့ . . .”
လို့ပြောရင်း ကျမပုခုံးလေးကို ဆွဲဖက်လိုက်တယ် . ..။
ယောကျ င်္ားတွေများ..အခြေအနေလေး ကောင်းတာနဲ့ စဖက်ချင်တော့တာပါဘဲ ရှင် ။
အရက်တခွက် ၀င်သွားပြီး အကိုဟာ ပိုရဲတင်းလာတယ် . .။
ကားထဲလဲေ၇ာက်ရော . .အကိုက ကျမပါးပြင်ကို အာဘွားပေးတော့တာဘဲ ။
( အို . . .အကို့ . . )
( ချစ်တယ် အညိုရယ် . . .အရမ်းချစ်တယ် . . )
ကျမ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း အခုံမြန်နေရတယ် . ..။ အကိုက အတင်းဖက်တာဘဲ . .။
ပါးပြင်တွေကို တအား နမ်းတယ် …။ ပြီးတော့ . သူဆက်ပြီးနမ်းတာက .ကျမရဲ့
နှုတ်ခမ်း . .. ။ ကျမ နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ငုံ စုတ် တယ် . .။
ကျမလဲ ယောက်ျားတယောက် နဲ့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ပထမဦးဆုံး စကြုံဘူးတာ မို့
အရမ်း စိတ်တွေ လှု့ပ်ရှားတာဘဲရှင် . .။ ရင်တွေ တုန်ပြီး . .ခြေထောက်တွေ
နှုတ်ခမ်းချင်း အကြာကြီး ဂဟေဆက် စုပ်နေပြီး တော်တော်ကြာပြီးမှ . .သူ
ဖယ်ခွာ ပြီး . .( အညို…အကို့ကို ချစ်တယ် လို့ ပါးစပ်က ပြော . . .) လို့ ကျမကို
ပြောခိုင်းတယ် . .။ ကျမလဲ . . ရုပ်၇ှင်တွေ စာအုပ်တွေထဲ ဒီလို အခန်းတွေ
မြင်ဘူး..ဖတ်ဘူးတာ များနေပါပြီ . .။
“ အကို့ကို အညို ချစ်ပါတယ် . .. .” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် . . .။
သူက မချင့်မရဲ ပုံစံနဲ့ . .ကျမခါးသိမ်လေးကနေဆွဲ ဖက်လိုက်ပါတယ် . . .။ ကျမ ရဲ့
ဆူဖြိုးတဲ့ နို့နှစ်လုံး ဟာ သူ့ရင်အုပ်ကြီးထဲ ပိပြားအောင်ဘဲ ဖိကပ်မိနေကြပြီ . ..။
သူ့လက်ဖ၀ါးကြီးက ခါးဆီကနေအောက်ဖက်ကို ရွေ့သွားနေတယ် . .။ ကျမလဲ
သူ့ပုခုံးထက်မှာ ခေါင်းလေးမှေးမှီထားပြီး သူဖက်ပွေ့ကိုင်တွယ်သမျှတွေကို
ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ခံနေရတာပေါ့ . . .။ သူ့လက်ဖ၀ါးကြီးက ကျမ ဖင်တုံးတွေကို
ဖွဖွလေး ပွတ်နေပြီ . .။ ကြက်သီးတွေထပြီးကျမပေါင်ကြားမှာလဲစိုတိုတို ..ဖြစ်လာရတယ်
. ..။အိုရှင် . .သူ့ လက်ချောင်းတွေက ကျမ ဖင်ကြားထဲကို ထိုးဝင်ပွတ်သပ်နေကြပြီ
. .။ ( အကို .. . .အညို ကြောက်တယ် . . .)
သူကတော့ ကျမ ဘာပြောနေတယ် ဆိုတာ မကြားသလိုဘဲ . .။ ကျမ ထမိန်စကို
ဆွဲဖြုတ်ပစ်နေတယ် . . ..။
“ အကို…ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ . . ”
သူကတော့ကျမ ဘာပြောနေပြောနေ သူလုပ်ချင်တာတွေကိုဘဲ ဆက်လုပ်နေပါ တယ်
….။ သူ့လက်ဟာ ကျမထမိန်ထဲေ၇ာက်နေပြီး ကျမရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို
ကိုင်နေပါတယ် . ..။ပေါင်တန်တလျောက်စိတ်လှုပ်၇ှားမှုကြောင့်. .ကြက်သီးဖုလေးတွေ
တအားထကြွနေရတယ် . .။ ကျမ၇ဲ့ ပေါင်ဂွဆုံ က စောက်ပတ်ကြီးဟာ ပွစိပွစိ
ဖြစ်နေရပြီး ကာမေ၇ှ့ပြေး အရေတွေဟာလဲ ဒလဟော စိမ့်ထွက် စီးဆင်းနေကြတာ
ကျမပေါင်တွေဆီကိုတောင် စီးကျနေကြပြီ .. . ..။
ကျမပေါင်တန်တွေကို ပွတ်သပ်နေတဲ့ အကို့လက်ဟာ ကျမ ရဲ့အတွင်း
ခံဘောင်းဘီလေး အပေါ်ကနေ ကျမ စောက်ပတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ကို အုပ်ပြီး
ကိုင်တွယ်လာပါတယ် …။ ( အကိုရယ် . . . .ဘာ….ဘာ….ဘာတွေ….
လျောက်လုပ်နေတာလဲ . . . . .. .)
အကိုက ဘာမှ ပြန်မဖြေပါဘူး . . ။ ကျမ စောက်ပတ်ကြီးကိုဘဲ အာရုံထားနေပုံရ
တယ် . .။ ( အို . . .)
သူ့လက်ချောင်းတွေက ကျမ စောက်ပတ်ကြီး ကို အပီ ကိုင်တွယ်နေကြပြီ .. ။
ချစ်သူ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ..မှာဘဲ အကိုဟာ ကျမ စောက်ပတ်ကို စိတ်တိုင်းကျ
ကိုင်တွယ်နေပါပြီ . . .။
( အို့ ….အကို့် . . .. )
သူ့လက်ချောင်းတချောင်းဟာ ကျမစေ့နေကြတဲ့ . . စောက်ပတ်ရဲ့
နှုတ်ခမ်းသားထူထူနုနုလေးတွေကို အလယ်ကနေ ထိုးခွဲနေပါတယ် . .။
အာ…အာ…အာ….သူ…သူ ကျမ စောက်ပတ်ထဲ လက်ညှိုး နဲ့ ထိုးကလိနေတယ် . .။
( အိုး . . .အိုး . .. . …အဟင့်……………………………………)
အကို့နှုတ်ခမ်းတွေက ကျမ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံစုတ်နေပြန်ပြီး . . .ကျမ
နှုတ်ခမ်းတွေကြားထဲ သူ့လျာကြီးကို ထိုးသွင်းပြီး . .ကျမလျာလေးကို လာ
ပတ်သက်နေတယ် ..။ လာကလိနေတယ် . . ။
အကို့ရဲ့ နှူးဆွမှုတွေကြောင့် ကျမဟာ . .ကမစိတ်အမြင့်ဆုံးပိုင်း ကို
ရောက်ရှီလာရတော့တယ် . . .။ ( အညို့ကို အကို နမ်းချင်တယ် . . .)
( အာ..အကိုကလဲ .. ခုဘဲ နမ်းနေတာဘဲ မဟုတ်လား . . .)
( နိုး…နိုး …..အကို နမ်းချင်တာက အညို့ အောက်ဖက်က နှုတ်ခမ်းတွေ . . .)
( ဘာရယ် . .အကို . .အညို …နားမရှင်းလို့ . ..)
( အော်. .အကိုက အညို့ ဒီနေရာကို နမ်းချင်တယ်လို့ . . .)
ကျမပေါင်ကြားကို သူက ..လက်နဲ့ပုတ်ပြပြီး ပြောပါတယ် . .. ။
( အို . .. )
ကျမ တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ် ရှင် . . ။
စပြီး ချစ်တယ် လို့ဖြေတဲ့နေ့မှာဘဲ အကိုက ကျမပေါင်ကြားက ဟိုဒင်းကို
နမ်းချင်တယ် ဆိုတော့ မစောလွန်းဘူးလား . . . . ။
အကိုက ကျမကို ချစ်တယ် ဆိုတာကိုလဲ သံသယ ဖြစ်မိသွားသလိုဘဲ . .။ ကျမ ကို
လိင်ဆက်ဆံချင်တာ သက်သက်နဲ့ဘဲ ချဉ်းကပ်တာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကို ကျမ
ခေါင်းထဲမှာ မေးမိရတယ် . .။
ဒါပေမဲ့ လက်သွက်တဲ့အကိုက ကျမကို ခွင့်တောင်းနေတာ မဟုတ်ဘဲ
အသိပေးနေတာသာ ဖြစ်ကြောင်း ကျမ သိလိုက်ရ တယ် . .။ သူ …သူ ကျမ ထမိန်
ကို လှန်တင်လိုက်လို့ပါဘဲ . . . ။သူ..သူ ကကျမပေါင်ကြားက ကျမတို့ မိန်းမသားတွေ
ရဲ့ ရတနာကြီးတခု ဖြစ်တဲ့စောက်ဖုတ် ကို နမ်းဖို့ လုပ်နေပြီလေ . . .။
ကျမလဲ သူ့ကို တားဖို့ နောက်ကျသွားပြီ . .။
ကျမရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ဟာ သူ့ လက်ထဲကို လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့
ပါသွားရပါတယ် . . .။
အကိုဟာ ကျမ ပေါင်တန်တွေရဲ့ ကြားမှာ ခေါင်းထိုးဝင်ပြီး နေရာယူထားပြီး ဖြစ်နေပြီ
. .။တော်တော်သွက်တဲ့ အကို ပါ . . ။သူ ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ . .ကျမ
သိနေတော့ ..ကြက်သီးတွေ ဖြန်းကနဲဖြန်းကနဲ ထတာပေါ့ ရှင် ..။
သူ..သူ ..ကျမ၇ဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကို ယက်တော့မယ် . . .။ အို ကျမ …ကျမ …သူ့ကို
အားနာလိုက်တာ . ..။ ကျမ စောက်ပတ်မှာက အရေတွေ တအား စိုစို ရွှဲနေတာ ..။
( အကို..အကို …. )
သူမော့ကြည့်တယ် . .. ။
( စိုနေတယ် .. အကို . .)
( ကိစ္စမရှိဘူး အညို . . .)
အကိုဟာ မ၇ွံမရှာ ကျမ စောက်ပတ်ကြီးကို စပြီး ယက်ပါတော့တယ် . .။
ယက်နေရင်း . ကျမရဲ့ ဖင်အောက်ကို လက်လျိုထည့်လိုက်ပြီး ဖင်တုံးတွေကို
ဆုတ်နယ် ပါတယ် . .။ အကို့လျာကြီးဟာ ကျမရဲ့ အရသာဖူး စောက်စိလေးကို
ကလိနေပါတယ် . .။ ကျမလဲ ဖင်တွေ ကော့ထောင်ပေးမိရပြီး . .အရသာက
ထူးကဲလှတာမို့ နုတ်ကမညည်းဘဲ မနေနိုင်အောင်ပါဘဲ …။
တအင်းအင်း ညည်းနေတဲ့ ကျမစောက်ပတ်ထဲကိုသူ့လျာကြီး ..သွင်းထည့်နေပြန်တယ်
…။ ကျမလဲ ထွန့်ထွန့်လူးရပြီ . .. ။ကျမရုန်းဖယ်လို့မရအောင် အကို က ..
ကျမဖင်တုံးတွေကို ဆုတ်ကိုင်ထားနေတယ် …။ပြိကနဲ ပြတ်ကနဲ အသံတွေ ကြားနေရ
“ အိုဟို . . အကို . .အကိုရယ် . . အညို့ကို ရက်စက်နေတာလား . . )
အကိုကတော့ ကျမ စောက်ပတ်ကို အပီအပြင် ယက်ပေးနေတာကြောင့် ကျမကို
စကားပြန်မပေးနိုင်ဘူးလေ . . သဲသဲမဲမဲ ကို ယက်နေတာ . . .။
ပထမဆုံးအကြိမ် စောက်ပတ် ယက် ခံရတာပါဘဲ ရှင် . . .။ အား . .. အား .. . .အား
. . .အား .. .. .အို . .ကောင်းလဲကောင်း . . .ယားလဲယား . . . .
( အကို…အကို . . အညို . . .အညို . .. မရတော့ဘူး . .. မခံနိုင်တော့ဘူး . .. )
အကို ကျမကို မော့ကြည့်တယ် . . ။ စောက်ပတ်ယက်တာကို ရပ်လိုက်တယ် . .။
ကျမလဲ မ၇ှက်နိုင်တော့ပါဘူးရှင် . .။
အကို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဘဲ ပြောရတော့တယ် . . ။
( အကို . . အညို့ ကို လုပ်ပါတော့ . .အညို့ ဟာအထဲက အရမ်း ယားနေပြီ . .အကို
လုပ်ပေးပါတော့ . . .)
အကိုက ပြုံးနေတယ် . . ။
ကျမလဲ သူထထိုင်လိုက်တော့ သူ့ပေါင်ကြားကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တာ
..အသက်ရှုမှားသွားရတယ် . .။ အို . .သူ . .သူ ..ပုဆိုး မ၇ှိတော့ဘူး . .။
သူ့ပေါင်ကြား က သူ့လီးကြီး က ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဘဲ တုတ်ခိုင်
ရှည်လျားနေတာ တွေ့လိုက်၇လို့ပါဘဲ . .။
“ အကြီးကြီးပါလား..အကို . . .”
“ ဘာကြီးတာလဲ အညို . . ”
“အကို့ဟာကြီးပေါ့ . ..ဖြစ်ပါ့မလားအကိုရယ် . . .”
“ ဖြစ်တာပေါ့ အညို . .လီး နဲ့စောက်ပတ်ဆိုတာ မတန်ဘူး ဆိုတာ မရှိဘူး . .စောက်
ပတ်ဆိုတာ ရော်ဘာလိုဘဲလေ . .လီး ဘယ်လောက်ကြီးကြီး . .လက်ခံနိုင်တယ် .. ”
အကိုက လီး ..စောက်ပတ် ဆိုတဲ့ စကားတွေ သုံးနှုံးနေတာ ကျမ လဲ
နားရှက်သလိုဘဲ ..။ အကို့ကို ကျမက အရင်က ဒီလို စကားတွေ သုံးလိမ့်မယ်လို့
မထင်ခဲ့မိဘူးလေ . . .။
“အညို . ..တီရှပ် ချွတ်လိုက်ပါလား . .အညို့ နို့တွေကိုလဲ အကို နမ်းချင်လို့ . .
ပြီးမှ လိုးပေးမယ်နော် . . )
“ အကိုရယ် . .နားရှက်ပါတယ် . .ဘာတွေ ပြောနေမှန်းလဲ မသိဘူး ကွာ . . .”
ကျမက တီရှပ်ကို ချွတ်ရမှာ ရှက်နေတော့ . .အကိုကဘဲ . .ချွတ်ပေးတယ် . .။
ဘရာစီယာလေးကိုလဲ အကိုကဘဲ ချိတ်ဖြုတ်ပြီး ဖယ်ခွါလိုက်တယ် . . .။
( ရှက်တယ်ကွာ . . . .)
“ အာပါး . . အရမ်းလှတာဘဲအညို . . .အညို့နို့တွေက အရမ်းလှတာဘဲ . . .”
( အကိုနော် . .ရှက်ပါတယ် ဆိုနေမှ . . .)
အကိုက ကျမနို့တွေကို နမ်းနေပါတယ် . .။
ကျမဟာ အရမ်း ခံချင်နေပါပြီ . .။ စောက်ပတ်ကြီးမှာလဲ အရေတွေက ယိုစီးကျနေတာ
မြင်မကောင်းအောင်ပါဘဲ ရှင် . .. ။
အကိုက နို့တွေကို စို့နေတယ် . . ။
သူ့လျာကြီးနဲ့ ကျမနို့သီးဖုလေးတွေကို ကလိတယ် . .။
သူ..သူ..သိပ်တတ်တာဘဲ . .။သိပ် လုပ်တတ်တာဘဲ . . .။
( အကို . .အကို . .အညို မနေတတ်တော့ဘူး . .)
( လုပ်စေချင်ပြီလား . .လိုးပေးရတော့မလား . .)
ကျမလဲ ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်တယ် . ..။
အကိုဟာ ကျမကို လိုးဖို့ ပြင်နေပြီ . .။ ကျမပေါင်တွေကို ဘေးကို ကားလိုက်တယ်
..။ ကျမစောက်ပတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်နေလို့ . .ကျမလဲ ရှက်ပြီး . .
“ ဟိတ် . .မကြည့်နဲ့ . .” လို့ တားမိတယ် . . ။
အကိုက တဟဲဟဲ နဲ့ရယ်တယ် . .. ။ အို့ . . .သူ . .သူ ထိုးထည့်ပြီ . . ။
ကျမစောက်ပတ်ကြီးထဲ . .သူ့လထစ်ကြီး . .ပြိကနဲ ၀င်လာတယ် . . .။
( အ . ..ဖြေးဖြေး . . .)
သူ့ဒစ်ကြီး က မှိုပွင့်ကြီးလိုဘဲ . .။ထိပ်ဖူးကြီးက ကောက်ကောက်ကြီး . .. ။
အရေတွေက တအားစိုရွှဲနေတာမို့ . .ဒစ်လုံးကြီး မြုပ်ဝင်သွားတယ် . . .။
( ဖြေးဖြေးအကို . .အညို့ဟာ ကွဲပြဲ သွားနေအုံးမယ် . . . )
အကိုက ကျမ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာ ကြားထဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ၀င်နေတဲ့
သူ့လီးချောင်းကြီး ကို တဖြေးဖြေး ထိုးကြည့်နေတယ် . .. ။ အရေတွေ
စိုစိုရွှဲနေသည့်တိုင် . .သူ့လီးကြီးက တုတ်လွန်းလို့လား . .ကျမရဲ့ အပျိုစစ်စစ်
စောက်ပတ်ကြီးကဘဲ ကျပ်လွန်းလို့လားမသိဘူး . .။ တင်းကျပ်နေတယ် . .။
မဆန့်မပြဲကြီး . ..တစ် နေတယ် . . . ။
အကိုကဆက်မသွင်းသေးဘဲ… . .ကျမနို့တလုံးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ ငုံပြီး ပြွတ်ပြွတ် နဲ့
တအားစို့တော့တာဘဲ . ..။ ကျမလဲ …အကိုနို့စို့နေတာဘက် စိတ်ေ၇ာက်နေတုံး
. .ဗျိကနဲ အကိုက လီးကြီးကို သွင်းထည့်လိုက်တယ် . ..။
( အိုး . . . )
လီးတန်ကြီး တ၀က်လောက် ၀င်သွားတယ် .. .။ ကျမစောက်ခေါင်းထဲ သူ့လီးတန်ကြီး
ရောက်နေတာ ..စိတ်တွေ တအားလှုပ်၇ှားရတာဘဲ . .။
( နာလားဟင်..အညို . .)
( ဟင့်အင်း..နာဘူး . .)
( အညို့စောက်ပတ်က တအားကျပ်တာဘဲ . .)
( ဟွန်း . .အပျို အစစ်၇ှင့် . .တခါမှ မကြုံ ဘူးသေးဘူး . .)
အကိုက ဖြေးဖြေး ချင်း သွင်းလိုက် ဆုတ်လိုက် လုပ်ကြည့်နေတယ် . ..။
သူ့နှုတ်ခမ်းကလဲ ကျမနို့တွေကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့လိုက် ..နို့သီးတွေကို
လျာထိပ်လေးနဲ့ ကစား ကလိလိုက် လုပ်ပေးနေတယ် . ..။ သစ်ငုတ်တိုတောင်
နှဲ့ပါများတော့ လှုပ်လာရသေးတာဘဲ ရှင် . .။ စောက်ပတ်ကျပ်ကျပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့
လီးလဲ ကြာကြာနေတော့ . .လိုးလို့ရလာရတာပေါ့ . . ။
အကို့လီးတန်ကြီး ဖြေးဖြေးလေး ၀င်ထွက်နေပြီ . ..။ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေက
နုလွန်းတော့ အကို လိုးထည့်နေတာ ကျမအဖို့ . .အရမ်းကို အရသာရှိနေတာပါဘဲ ..
အကို့လီးကြီး က ကျမစောက်ပတ် အတွင်းနံရံတွေကို ပွတ်တိုက်သွားကြတော့
အရမ်း အရသာထူးကဲနေရတာပေါ့ . ..။
ခံနိုင်လာလို့ ..အကိုပြောတဲ့ စောက်ပတ်ဆိုတာ ရာဘာလိုဘဲ . .ဆိုတဲ့စကားကို
ကြားယောင်မိရ တယ် . .. ။
အကိုက ခပ်မှန်မှန် ဖြေးဖြေးချင်း လိုးပေးနေတယ် . .။ ကောင်းလိုက်တာရှင် ..
ကျမစောက်ပတ်ကြီးထဲ လီးတန်ကြီး ..ထိုးဆောင့်ပေးနေတာ . .အရသာထူးကဲနေလို့
ကျမလဲ ဖင်တွေကော့ဖြဲပြီး အကိုလိုးပေးသမျှ ခံနေမိတယ် .. .။
အကိုလဲ ကျမခံနိုင်လာတာသိတာကြောင့် . .အရင်ထက်ပိုပြီး သွက်သွက်လေး
လိုးဆောင့်လာ တယ် …။ တအားထွက်နေတဲ့ ..အရေတွေကြောင့် စောက်ပတ်နဲ့လီး
အ၀င်အထွက်တွေ မှာ ဖွတ်ဖွတ် ..ဖပ် ဖပ် နဲ့ အသံတွေ ထွက်နေတယ် . .။ အကိုက
ကျမ နို့ကြီးတွေကို အားရပါးရ ဆုတ်နယ်နေပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတယ် …။
ကျမလဲ ကောင်းလာတာနဲ့ အကို့ကို မြန်မြန် လိုးပေးစေချင်လာတယ် . .။
အောက်ကနေ ..ပြန်ကော့ကော့ပေး မိတယ် ..။
အကိုလဲ..ကျမ..မြန်စေချင်လာတာကို သတိထားမိပုံရ တယ် . .။ ခပ်မြန်မြန် နဲ့
ခပ်ပြင်းပြင်း လိုးဆောင့်ပေးလာတယ် …။
အသားချင်းထိရိုက်တဲ့အသံတွေက တဖန်းဖန်း ..ထွက်နေတယ် ..။
အကို့ေ၈ွးစိကြီးနှစ်လုံးက ..ကျမဖင်ကြားကို တဘတ်ဘတ်လာရိုက်ခတ်နေတယ် ..။
အို…ကောင်း…ကောင်း . ..ကောင်းလိုက်တာ … .
ကျမလဲ အကို့ဆောင့်ချက်တွေက ထိလွန်းလို့ ..မ၇ှက်နိုင်တော့ဘဲ နုတ်က ထုတ်
ရေရွတ်မိရတယ် . ..။
အကိုက ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရင်း . . .( ကောင်းလား အညို . . .) လို့မေးတယ် ..။
ကျမလဲ …“ ကောင်းတယ်. .အရမ်း ကောင်းတယ် . .. )
အကိုလဲ အရမ်းကောင်းပုံရတယ် .. ။ ကျမရဲ့ အပျိုစောက်ပတ်ကျပ်ကျပ် ကြောင့်
သူ အရမ်းကောင်း တာ ဖြစ်မယ် . .။ ကျမလဲ အကို တအားကြုံးလိုးပေးတာများ ..
ကြောင့် . .တကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်အောင်ဘဲ အကြောပေါင်းတထောင် စိမ့်ပြီး
တအားကောင်းသွားရတယ်……။ တအီးအီး အော်ပြီး ခေါင်းအုံးကို ဆုတ်ညှစ်ပြီး ကာမ
အရသာထူးကို ခံစားသွားရချိန် အကို လဲ ဆက်တိုက် ဆောင့်နေတုံး . .( အား . .
ဟားဟား….အင်း . ..အို…….အို .. .) ဆိုပြီး သုတ်တွေ ကျမ စောက်ခေါင်းထဲကို
တဆစ်ဆစ် ပန်းထုတ်ရင်း . .လမ်းဆုံးကို ရောက်၇ှိသွား တာ သိလိုက်ရတယ် . .။
ကျမ နဲ့အကို ပြိုင်တူလို ကာမအရသာ ထူးကဲတဲ့ ပြီးခြင်း အထွတ်အထိပ်ကို
ရောက်ရပါတယ် ရှင် . .. ။
အားနဲ့မာန်နဲ့ လိုးဆောင့်ပေးခဲ့တဲ့ အကိုလဲ ကျမဘေးမှာ လှဲချပြီး နားနေ
တော့တယ် . . .။ ကျမလဲ အကို့ရင်ခွင်ထဲ ၀င်တိုးပြီး . .( အညို့ကို ချစ်၇ဲ့လား . .
အကို …) လို့ မေးမိတယ် …။ အကိုက …( အင်း …) တဲ့ . .. ။
အမောဟောင်းပြေရင် အမောသစ်လေးစ မယ် ဆိုတဲ့ စာသား ကို
စာဖတ်များတဲ့ ကျမ စာအုပ်တအုပ်မှာ ဖတ်ဘူးခဲ့ပါတယ် . . . ။ အဲဒီစာကြောင်းလိုဘဲ
. .ကျမနဲ့ အကိုဟာအမောလေးပြေတာနဲ့ဒုတိယအကြိမ် .. ..ချစ်တလင်းခေါ်ကြပြန်တယ်
. . .။ ကျမလဲ စောစောက လိုးထားလို့ စောက်ပတ်က နဲနဲ စပ်သလိုလို နာသလိုလို
ရှိပေမဲ့ ..အကို က ကျမနို့တွေကို ကောင်းကောင်း စို့ပေး ..ကလိပေးသလို ..သူ့
လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့လဲ ကျမ ဆီးခုံမို့မို့ နဲ့စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကို ပွတ်တိုက်
ကလိပေးတာတွေကြောင့် ကျမရဲ့ စိတ်တွေ ပြန်ထကြွလာရပြီး အကို ဒုတိယအကြိမ်
လိုးပေးတာကို စိတ်ပါလက်ပါ ပါဝင်ဆင်နွဲမိ ရပါတယ် …။
ကျမနဲ့အကို ဟာ တချီပြီးတချီ လိုးလိုက်ကြတာ ..ကျမလဲ..
အ၀တ်မကပ်တော့တဲ့အထိပါဘဲ . .။ ထမိန်တောင် ပြန်မ၀တ်မိတော့ဘဲ
..ဖင်အပြောင်သားနဲ့ အိပ်ပျော်သွားရပါတယ် . …။
ကျမ နိုးလာတော့ . .တော်တော်တောင် မှောင်နေပြီ . .။
( အိုး . .အကို…အကို . .. အိမ်ပြန်စို့ . .မှောင်နေပြီ . . .)
တော်ပါသေးရဲ့ ..။ အိမ်မှာ အမေ မ၇ှိဘူး . .။ အမေက ရိပ်သာမှာ ဥပုဒ်စောင့်
နေတယ် . .။ ကျမကို လိုက်ပို့တဲ့အကိုဟာ အိမ်မှာ ကျမအမေ မရှိတာလဲ သိရော
ထပ်ပြီး ကဲချင်ပြန်တယ် . .။ တော်တော်လဲ တဏှာကြီးတဲ့ လူ …. ။
အကိုရယ် . .နောက်နေ့မှ . .လို့ပြောတာလဲ မရဘူး . .။ အိမ်နားနီးချင်းတွေ သိရင်
ရပ်ကွက်ထဲ အညို့ကို နဂိုကမှ အတင်းချတာခံနေရတဲ့ အထဲ . .။
အကိုက မနက်ဖန်မှာ ဆက်ဆက်တွေ့မယ် . .ဆိုပြီး မပြန်ချင့်ပြန်ချင်နဲ့
ပြန်သွားပါတယ် . .။ ကျမ လဲ တနေကုန် အကိုနဲက ကဲထားတာကြောင့် ညစ်ပတ်နေ
သလို ခ့စားရတာနဲ့ ရေအေးအေးနဲ့ ရေချိုးလိုက်ပါတယ် ..။ စောစောဘဲ အိပ်ရာ
၀င်လိုက်တာ . .ပေါင်ကြားက ပူစပ်ပူလောင် ဝေဒနာ ရနေရပေမဲ့ အကို နဲ့
စိတ်ကြိုက် လိုးခဲ့ကြတာကို ကျေနပ်နေမိပါတယ် . .။
အကိုဟာ တကယ့် ဖိုက်တာ ပါဘဲ ရှင် . .။
ကျမ အကြိမ်ကြိမ် ပြီးရအောင် . .အရှက်ကုန်ပြီး . .တောင်းဆို၇လောက်အောင်…ဘဲ
အကို့လီး နဲ့ အကို့အလိုးကို ကျမ စွဲသွားခဲ့ရပါတယ် . .။
အကိုက အဖိုက်ကောင်းတော့ အညိုက ကြိုက်တာပေါ့ ရှင် . .။
ဝင့်ဝါရယ်အန်တီငြိမ်းတော့ ဒီတစ်ချီတည်းနဲ့ မျော့သွားတော့တာပဲကွယ်
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ရောက်နေတဲ့ ဝင့်ဝါတစ်ယောက်မှာ စူပါမားကက်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေရင်း အလုပ်နှင့် နီးသော တိုက်ခန်းတွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ o တရုတ်လူမျိုးအများစုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်တရုတ်ဘာသာစကားက ပြည်ပရောက်သော သူမတို့အဖို့ အလွန်အရေးပါလှသည်။ ဝင့်ဝါ ကံကောင်းချင်တော့ အခန်းဖော်က မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ်ကပြားမ တစ်ယောက် ဖြစ်ကာ စရောက်ကတည်းက အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် တရုတ်စကားကို ထမင်းစား ရေသောက်တော့ ဝင့်ဝါ ပြောတတ်နေပြီ။ အလုပ်မှာလည်း အဆင်ပြေကာ သူဌေးနှင့်လည်း ပနံသင့်လှသဖြင့် ဝင့်ဝါ ကံကောင်းလှသည်..။ စကာင်္ပူ ဒေါ်လာ (၁၈၀၀) ရသော အလုပ်မို့ မြန်မာငွေနှင့် ဆို ဆယ်သိန်းကျော်လောက် လစဉ် ဝင်ငွေ ရှိနေသည်..။ မိဘတွေက သူမ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်က ဆုံးပါးသွားခဲ့သဖြင့် သူမကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ဦးလေးတို့ လင်မယားကို လစဉ် […]
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်က ဤရွာဤကျောင်းကို စာသင်ပေးခဲ့သည့် မြို့ကြီးသူဆရာမကြီးဒေါ်နုနုထွေး ယခု ဤရွာကိုအလည်လာသဖြင့်တပည့် အ ဟောင်းတွေတပြုံးပြုံး တရွှင် ရွှင်သွားကန်တော့ကြပါသည်။ သို့ သော် ထိုအထဲ၌ တပည့်ဟောင်းတ ယောက်ဖြစ်သည့် အောင် သိန်းက တော့ မပါဝင်ချေ။ဟေ့ အောင် သိန်း ။ ဆရာမကြီး ဒေါ်ထွေးထွေးအလည်လာသကွ။ ငါတို့ သွားကန်တော့မလို့ ။မင်းရော မလိုက်သေးဘူးလား။ထိုသို့သူငယ်ချင်းတွေက မေးသည့်အခါတိုင်းအေး ။ နောက်နေ့ မှသွားမယ်ကွာဟူ၍ အောင် သိန်းက ဖြေပါသည်။ သို့ သော် သူသည် ဆရာမကြီးကို သွားကန်တော့ဘို့ စိတ်ကူးမရှိပါ။အဘယ်ကြောင့်နည်း။သူ့ ၌ ဆရာမကြီးကိုနာကျည်းစရာရှိနေ၍ပါလော။မဟုတ်ပါ။အတိတ်ကိုဆောင် ရမည်ဆိုသော့့်အောင် သိန်းသည် ဆယ်တန်းဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား။ […]
Page views today : 3,911
Total page view: 115,340